နာရီ - အ Vault: Secret ကိုဓာတ်ပုံဗီဒီယို Locker | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » နာရီ - အ Vault: Secret ကိုဓာတ်ပုံဗီဒီယို Locker
နာရီ - အ Vault: Secret ကိုဓာတ်ပုံဗီဒီယို Locker APK ကို
clock Vault (Secret ကိုဓာတ်ပုံဗီဒီယို Locker) လုံခြုံစောင့်ရှောက် & အလွယ်တကူသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ & သင်သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ကြည့်ဖို့အခြားသူများကိုမလိုချင်ကြဘူးအခြားဖိုင်တွေဖုံးကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံး privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက် App ဖြစ်ပါတယ်။
ဤစကားဝှက်ကိုသုံးပြီးမီဒီယာဖိုင်တစ်ခုချင်းစီပုန်းအောင်းအဖြစ်သင့် privacy ကိုကာကွယ်ဘို့တစ် Must-ရှိသည် App ကိုပါ!
သင်အလွယ်တကူ, ပြောင်းရွှေ့ & တင်ပို့ရုပ်ပုံများကိုပြခန်း & view ၏ဖိုလ်ဒါသို့မဟုတ်အယ်လ်ဘမ်စီမံနိုင်သည်။
• ရုပ်ပုံများ Hide: အလွယ်တကူပုဂ္ဂလိကဓာတ်ပုံကို Locker နှင့်သင်၏ပြခန်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vault မှရုပ်ပုံများကိုဖုံးကွယ်။
• ဗီဒီယိုများ Hide: အလွယ်တကူပုဂ္ဂလိကကိုဗီဒီယို Locker နှင့်သင်၏ပြခန်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vault ရန်သင့်ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာဖုံးကွယ်။
• ခိုင်မာတဲ့ AppLock: သင့်ရဲ့ Messenger ကို, ပြခန်း, Browser ကို, ဆက်သွယ်ရန်, အီးမေးလ်သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်အခြားမည်သည့် apps များသော့ခတ်။ သင်တို့သည်လည်းဝိုင်ဖိုင်, ဘလူးတုသ် & မကြာသေးမီတာဝန်များကိုသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။
• လက်ဗွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: သင်သည်သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်နာရီ Vault နှင့် Applock လက်ဗွေ Unlock ရန်သင့်လက်ဗွေရာကိုသုံးနိုင်သည်။
• icon ကိုဖျောက်ထားရန် / အစားထိုးမည်: ပိုကောင်းတဲ့အသှငျပွောငျး Vault များအတွက် Vault Calculator ကို, ပဲဖြစ်ဖြစ်, Music Calculator ကို Lock ကို, Calculator ကို Vault စသည်တို့ကဲ့သို့အခြား icon များနှင့်သင်၏နာရီအိုင်ကွန်အစားထိုးလိုက်ပါ။
• Break-အတွက်အချက်ပေး: သငျသညျသငျ့အားနောက်ကွယ်မှ app များကိုသော့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သူမည်သူမဆို၏ selfie တစ်လျှပ်တစ်ပြက်နှင့်မေးလ် Capture ။ သင်တို့သည်လည်းပြခန်း Vault အတွင်းပိုင်းကနေ snooper ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ & ကယ်တင်နိုင်ပါ။
• အတု Password ကို (ကျြလှညျ့ Locker): အတု Locker စနစ်အားပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့်တဲ့အခါမှာအစစ်အမှန်ပြခန်းသော့ခတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သငျသညျ input ကိုအတု password ကိုအတုအကြောင်းအရာပြသပါ။
• ပုဂ္ဂလိက Browser ကို (ရုပ်ဖျက် Browser ကို): ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး Lock ကိုဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့်အသံဖိုင်များကအင်တာနက်ထဲကနေ & သင့် system မရှိပုဒ်အရွက်ဖို့ပုဂ္ဂလိက web browser ကို။
• ဗီဒီယိုပလေယာ: ဗီဒီယိုကို Vault အတွင်းပိုင်းဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်ဖို့စူပါဖယ်ရှားရာမှာဗီဒီယို player ကို။
• themes Applock: သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်သော့င့်တယ်စေ applock themes များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ, သော့ခတ်မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှသတ်မှတ်ထားရန်သင့်ပြခန်း image ကိုရွေးချယ်ပါ။
• လွယ်ကူသော Navigation: သင်အလွယ်တကူညာဘက် iPhone အညွှန်းနဲ့တူ left အစွန်းကနေပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပြခန်း Lock ကိုအတွင်းပိုင်းကနေမျက်နှာပြင် back မှသွားလာလို့ရပါတယ်။
• လှပသောဒီဇိုင်း: ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ကြော့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို။
- App ကိုမကြာသေးမီ apps များစာရင်းထဲကပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
- အချိန် Lock ကိုကလေးတွေသို့မဟုတ်သူစိမ်းများကဖြုတ်ခံရခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးတယ်။
- လြယ္ကူဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။ (Edit ကို, Move တို့, Rename, Folders စသည်တို့ Create)
- သင့် app ကိုသော့ခတ်ဘို့ Backup ကိုစံနမူနာ Lock ကိုသတ်မှတ်မည်။
- ရှယ်ယာ option ကိုတို့ကပြခန်းများထံမှတိုက်ရိုက်ဝှက်ဖိုင်များကို။ လက်ငင်းရန်သင့်ပြခန်းထံမှ Vault မှဝေမျှမယ်မျိုးစုံဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများဖုံးကွယ်။
အချိန် Lock ကိုအသုံးပြုနည်းဘယ်လိုနေသလဲ?
1 Step: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vault နာရီစတင်ရန်နှင့်နာရီအလယ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
2 Step: နာရီနှင့်မိနစ်, ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားကအလိုရှိသောအချိန် password ကို Set နှင့် clock ၏အလယ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
3 Step: အခုအတည်ပြုနိုင်ရန်စကားဝှက်ကိုပြန်လုပ်ပါ။
အရေးကြီး: မဟုတ်ရင်သူကအစဉ်အမြဲရှုံးနိမ့်လိမ့်မည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖိုင်များကိုပြန်လည်မတိုင်မီဒီ app ကို uninstall မထားပါနဲ့။
ဒီ app စက်ပစ္စည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်။
clock Vault snoopers အားဖြင့်ဖြုတ် & ဒီ app ကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး မှလွဲ. ဒီခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုဖို့ဘယ်တော့မှခံရကနေကာကွယ်တားဆီးဖို့စက်ပစ္စည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
ဒီ app ကိုအသုံးပြုနိုင်မှုန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။
timer Vault app များကိုသော့ဖွင့်ဖို့မသန်စွမ်းပါဝါချွေတာ & အကူအညီနဲ့အသုံးပြုသူများအတွက် Accessibility န်ဆောင်မှုခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်။
- Launch နာရီ Vault နှင့် clock ၏စာနယ်ဇင်းအလယ်ခလုတ်ကို။ 10 Set: 10 အချိန်နောက်တဖန်နာရီနှင့်မိနစ်လက်စာနယ်ဇင်းအလယ်ခလုတ်ကိုရွေ့လျားသည်။ ဒါဟာစကားဝှက်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူ option ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
အမှတ်သင့်ဖိုင်တွေဒါအသစ်သောကိရိယာသို့မဟုတ်စက်ရုံတည်ဆောက်မှုမှလွှဲပြောင်းမတိုင်မီ backup လုပ်ထားရန်အားလုံးသင့်ရဲ့ဝှက်ထားသောဖိုင်များကိုသေချာအောင်ကျေးဇူးပြုပြီးသာသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်သိမ်းဆည်းထားသည်။
ငါဒီ app ၏ဖယ်ရှားရန်အပြီးငါ့အဖိုငျမြားကို recover နိုင်သလား?
သင် app ကို uninstall တစ်ချိန်က -You သင်၏ဖိုင်များကိုပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဖယ်ရှားရန်မှသင်၏ app ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒီ app settings ကိုမှ "Uninstall ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း" ပေါ်တွင်သို့ကူးပြောင်းပါ။
ကျနော်တို့အပြည့်အဝသီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုအာရုံစိုက်နှင့်အများဆုံးအဆင့်မြင့်ဝှက်ရုပ်ပုံသည်နှင့်သင့် privacy ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစောင့်ရှောက်ရန်ဗီဒီယို app ကို Hide!
ဖိုင်မှတ်တမ်းပြောင်းရွှေ့မြန်နှုန်းတိုးတက်မှု + ။
+ Applock ဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု။
+ Now ကိုသင်နောက်ဆုံးအချိန် left ရှိရာကနေလျှောက်လွှာပြန်ဆက်နိုင်ပါသည်။
ကိုသတိရပါ: သင်သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ဟာ 10 သတ်မှတ်ထားနိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာရီအတွက် 10 အချိန်နှင့်စာနယ်ဇင်း Center ကခလုတ်ကိုစကားဝှက်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။ ဒါ့အပြင်ဒီ app ၏ Uninstall မတိုင်မီပြည်သူပိုင်ပြခန်းအားလုံးကိုဝှက်ထားသောဖိုင်များကိုရွှေ့သတိရပါ။ ဖြုတ်တဲ့အခါမှာ System ကို app ကိုအတွင်းအပြင် data တွေကိုရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်။
နာရီ - အ Vault: Secret ကိုဓာတ်ပုံဗီဒီယို Locker
6.19 ကို MB
clock - လျှို့ဝှက်ချက် ...
Applock - ...
ပုဂ္ဂလိက Hide ...
, ရုပ်ပုံများ Hide ...
Calculator ကိုဓာတ်ပုံ ...